भारतलाई गल्वानको सन्देश दिन चिनियाँ ह्याकरले गराइदिएका थिए मुम्बईमा लोडसेडिङ! - Himali Patrika
भारतलाई गल्वानको सन्देश दिन चिनियाँ ह्याकरले गराइदिएका थिए मुम्बईमा लोडसेडिङ!
हिमाली पत्रिका १८ फाल्गुन २०७७, 10:31 am
गत वर्ष जुनमा भारत र चीनका सैनिकहरू हिमालयको काखमा रहेको गल्वान उपत्यकामा एकअर्कासँग झ’ड’प गरिरहेका थिए। झ’ड’पमा भारतका २० र चीनका ४ जना गरी २४ जना’को मृ’त्यु भएको अहिलेसम्म खुलेको छ। सीमा निर्धारण हुन बाँकी रहेका यी दुई देशका सैनिक सीमामा आमनेसामने हुनु सामान्य हो तर ह’तियार’बिना खटिएका सैनिकले एकअर्काको ज्या’न लि’एको घटना दशकौंपछि भएको थियो। गल्वान झ’डप’पछि आ’ण’वीक शक्ति सम्पन्न यी दुई मुलुक यु’द्ध’मा जाने त होइनन् भन्ने विश्वव्यापी चासो थियो।
गत अक्टोबर १२ मा भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा घन्टौंसम्म बिजुली गयो। अधिकारीहरूले बिजुली नभएपछि रेल सेवा नै बन्द गर्नुपर्‍यो। कोरोनाभाइरसका संक्रमित उपचार गरिरहेका अस्पतालहरूले भेन्टिलेटर चलाउन आपतकालीन उपाय लगाए। २ करोड मानिस बसोबास गर्ने मुम्बईको जनजीवन बिजुली नहुँदा अस्तव्यस्त भयो।
गल्वान उपत्यकादेखि मुम्बई १५ सय माइल टाढा छ। अक्टोबरमा मुम्बईले झेलेको लोडसेडिङ भने गल्वानसँग जोडिएको हुन सक्ने अहिले खुलेको छ। अमेरिकाको रेकर्डेड फ्युचर संस्थाले गरेको अनुसन्धानले मुम्बईमा बत्ती जानुका पछाडि चिनियाँ सरकारसमर्थित सा’इ’बर ह्या’क’र्सह’रूको हा’त हुन सक्ने देखाएको छ।
द न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित समाचारअनुसार चीनको सरकार समर्थित समूह रेड इकोले भारतीय विद्युत उत्पादन र वितरण प्रणालीको सफ्टवेयरमा माल्वेयर पठाएर १२ वटा संवेदनशील नोडमा पहुँच बनाएको उल्लेख छ। सोही अनुसार उसले मुम्बईलाई लक्षित गरी विद्युत प्रणाली अवरूद्ध गरिदिएको हुन सक्ने रेकर्डेड फ्युचरका अधिकारीहरूको अनुमान छ।
भारतको विद्युत प्रणालीभित्र पस्ने आफ्नो अधिकार नभएकाले चिनियाँ ह्या’करह’रूले पठाएको कोड के थियो भन्ने पत्ता लगाउन नसकेको रेकर्डेड फ्युचरले जनाएको छ।
सीमामा तनाव बढ्दै गए हामी केसम्म गर्न सक्छौं भनेर नयाँदिल्लीलाई सन्देश दिन बेइजिङले मुम्बईमा लोडसेडिङ गराएको हुन सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भारतको केन्द्रीय सरकारले यसबारेमा अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
अक्टोबर १२ को लोडसेडिङबारे महाराष्ट्रको स्टेट साइबर सेलले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमा साइबर हमलामार्फत् बिजुली वितरणलाई खत्तम पार्ने प्रयासस्वरूप उक्त घटना भएको बताएको छ। सोमबार महाराष्ट्रका गृहमन्त्री अनिल देशमुखले उक्त प्रतिवेदन राज्यका उर्जा मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको बताएका छन्।
यो घ’टनाबारे अनुसन्धान गर्ने केन्द्रीय सरकारले पनि अनुसन्धान समिति बनाएको छ।
नयाँदिल्लीस्थित चिनियाँ दूतावासले भने भारतको विद्युत प्रणालीमा आफ्नो देशका ह्या’कर’हरूले हमला गरेको भन्ने कुरा आधारहीन भएको बताएको छ।